Ukufikelela kwi-Oracle Spatial ukusuka eBentleyMap - Geofumadas
Ukufikelela kwi-Oracle Spatial ukusuka eBentleyMap
NgoFebruwari, 2016 cadastre, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Oku kulandelayo ngumzekelo wemisebenzi eyenzekayo usebenzisa iMicstation BentleyMap ukulawula ulwazi oluvela kwi-OracleSpatial database.
Faka i-Oracle Client
Akuyimfuneko ukuba i-Oracle ifakwe kwikhompyutha. NguKlayenti kuphela, kulo mzekelo ndisebenzisa i-11g R2. Ngokungafaniyo xa isetyenziswe Microsation GeographicsAkukho mfuneko ukuchaza umtya uqhagamshelwano kwi client, ngokuba kukho wasebenza ngokufanelekileyo usebenzisa isinxibelelanisi ODBC. Ukuba BentleyMap, umtya uxhulumaniso ichazwe a VBA aliyi kungena kuyo, iya kugcinwa kwindawo XML okanye wangena lenjongo ngexesha uqhagamshelo lwefayile.
Xhuma kwi database
Oku kufuneka ukwenze oku:
Ifayile> imephu engenakwenzeka
Oku kudala ithebhu kwipaneli ecaleni, oko kusenza sikwazi ukudibanisa nedatha evela kwimithombo eyahlukeneyo. Kwimeko yeBentleyMap, ukusuka apha unako ukufikelela kwiinkcukacha ze-Oracle, iinkonzo ze-SQL Server kunye neWFS.
Inceba yokuba akukho nxu lumano kwi-PostGIS.
Kwifolda yexhumo, nqakraza ngakwesokudla uze ukhethe uNxibelelwano lwe-Oracle entsha ...
Oku kubonisa iphaneli, apho kufuneka singene kumsebenzisi, iphasiwedi kunye neenkonzo zedilesi.
Kwimeko yokufikelela kwi-port, edla ngokuba yi-1521, kunye nomncedisi kunye neenkonzo ezikude apho ipapashwa khona.
Iipropati zonxibelelwano zingagcinwa njengefayile ye-XML yokwandisa i-orax, i-sqlx okanye i-wfsx ukubiza ngaphandle kokungena emasimini.
Buza uhlele ulwazi
Emva kokuba udibaniso luyilwe, iziqendu ezikhoyo kwiprojekthi ziboniswa, ezingabonwa ngendlela ehlelekile ngohlobo, okanye ngodidi lweempawu ezichazwe Umlawuli weGeospatial.
Ukubonisana nedatha, i-icon ifom yeglasi isetyenzisiweyo, oku kuvumela ukubonisa ulwazi kwifom yefomula okanye njengesakhiwo se-xml.
Inqakraza elungileyo lemouse izinto ezifanayo zendawo yokusetyenziswa kwebar ziboniswa:
I-Querry isetyenziselwa ukwenza umbuzo weedatha, mhlawumbi ukusuka kwisiboniso (Jonga) okanye ukusuka kwimibuzo ethile, okanye ukusuka kuyo yonke idatha ekhoyo kwi-schema yendawo.
Iposi lisetyenziselwa ukugcina utshintsho olwenziwe kwiJometri.
Vala / uvule ukunika ithuba lokwenza utshintsho.
Ukucima ama-Cached Instances kucacisa idatha yokujonga
Ukuba ufuna ukwenza umbuzo othize, ungayifaka ensimini Kuphi Umhlathi, Ngokutsho iinkcukacha eziqulathwe kule nto. Kulo mzekelo, ndifuna nje iipasile, leyo ke ubume inxaxheba yaye bobakhe 0006 08 kwicandelo iSebe kunye noMasipala 01. Le umbuzo kungaba:
KUNYE KUPHELA = 0 08 KUNYE CODMUNICIPIO CODDEPARTAMENTO = = = 01 0006 AND ICANDELO
Kubalulekile ukuqonda ukuba i-BentleyMap iguqula ngokwenene, ngoko ke ukuba amathuba okwenza iintlekele zikho ukungabikho kolawulo lwezokhuseleko. Kubalulekile ukusekwa ngokucacileyo indima yabasebenzisi, ekulawulweni kokutshintsha kunye neendlela zokubuyisela zolwazi ezicatshulwe ngephutha. Ngokuqhelekileyo abantu bahlaziye kwaye badibanisa ukuba ivale ngokuvula.
Konke oku, kuyimangalisa, ucinga ukuba unayo yonke i-software ye-CAD. Isithethe sithi ufanele benzisa iVBA ukuphathwa okungcono kwezixhobo kunye nolawulo lokuthengisana.
Post edlulileyo«Edlulileyo Indawo yeTwilight
Post Next Iiveki ze-2 zeMatriki yaseMelika yaseMelikaOkulandelayo "